Waa maxay sababta iska caabinta Filterka hufan u yahay mid wax ku ool ah-Warshadaha News-Shanghai Sffiltech Co., Ltd.
Waa maxay sababta iska caabinta Filterka waxtarka leh uu wax ku ool u yahay
Waqtiga: 2019-04-11 Hits: 30
Iyada oo ay sii kordheyso wasakheynta deegaanka iyo xoojinta wacyiga dadka ee deegaanka, tayada hawada ayaa noqotay mid ka mid ah meelaha diirada la saaray. Haatan waxaa la aqoonsaday in nidaamyada sifeynta hawada aysan kaliya ilaalinayn mashiinnada laakiin sidoo kale ay ilaalinayaan dadka. Sidaa darteed, codsashada Shaandhaynta Hawada sare ee waxtarka leh ayaa si aad iyo aad ah u ballaaran, oo ay ku jiraan warshadaha dawooyinka, aqoon isweydaarsiga wax soo saarka qurxinta, isbitaalka, warshadaha wax soo saarka cuntada, qolka nadiifka ah, qaboojiyaha, nidaamka HAVC.
Laakiin wadarta kharashka nidaamka hawada nadiifka ah waa sarreeyaa, kharashka hawlgalka ee qalabka nadiifka ah waxaa lagu tiriyay qayb weyn oo ka mid ah wadarta kharashka, tusaale ahaan, warshadda guud ee qalabka elektarooniga qolka nadiifka ah iyadoo la adeegsanayo foomka wareegga hawada ee mashiinka mashiinka foosha, haddii unugga wareegga tamarta dabaysha Isticmaalka 0.236w M3 / h) xisaabinta, korontada waxay ku kacdaa 0.6 yuan, kaliya qiyaastii 5 milyan yuan sanadkii si ay u socodsiiso koronto.
Marka kharashyada hawlgalka badan waxay noqdeen adeegsiga Sifeeyaha Hawada ee hufan si kor loogu qaado caqabadaha. Waxay yareyn kartaa isticmaalka tamarta qalabka, taas oo ah, si loo hubiyo waxtarka gaarka ah ee shaandhada iyadoo la raacayo hoos u dhigista iska caabinta waxtarka sare ee Sifeeyaha Hawada ayaa fure u ah xalinta dhibaatada. Iska yaree isticmaalka tamarta ee qalabka nadiifka ah waxay noqotay mid ka mid ah jihada hadda ee baaritaanka hawada nadiifka ah. Is-hagaajinta qaab-dhismeedka Sifeeyaha Hawada, waa qaab wax ku ool ah oo lagu gaaro hadafkan.
Tobannaankii sano ee la soo dhaafay, Naqshadeynta qaab-dhismeedka miiraha hawada ayaa sameysay horumar la taaban karo, oo ay ugu muhiimsani tahay hormarinta shaandhada aan kala-sooc lahayn. Majiraan Shaandheeyaha Hawada waa nooc cusub oo shaandhaynta waxtarka sare leh oo la soo saaray 1970-yadii, kaliya ma aha inuu meesha ka saarayo halista dhaawaca warbaahinta. Laakiin sidoo kale si wax ku ool ah u kordhiya aagga sifeynta, hagaajinta waxtarka sifeynta, iyo yareynta caabbinta hawada, taas oo yareyneysa isticmaalka tamarta.
Qeybinta naqshadeynta sare ee kala-sooc la'aanta qeybta sare waa in la yareeyo iska caabbinta qaabdhismeedka, iyo qaabdhismeedka boorsada ee caabbinta qaabdhismeedka shaandhayntu waa yar tahay. Qaab-dhismeedka miiraha ee la midka ah nooca YGG ee iska caabinta hooseeya ee wax-ku-oolka ah ee shaandhada bacda shaandhada, laakiin tijaabada waxaa laga filayaa inay hesho dhexroorka bacda shaandhada ee ugufiican oo aad uga ballaaran 20mm, mana jirto kaalmo doorka mashiinka miiraha, sidaasna ku sii kordhaya Aagga kanaalka qulqulka, yaree iska caabinta. Sidaa darteed, Shaandhada Hawada wax ku oolka ahi waxay leedahay rajo suuq oo suurtogal ah, falanqaynta imtixaanka tijaabada ah muhiimad dhaqaale iyo mid farsamo labadaba.
Dhibaatada wasakheynta hawada oo aad iyo aad u daran, Filter hawo tayo sare leh oo ku jirta dalabka warshadaha ayaa aad iyo aad u badan. Si kastaba ha noqotee, haddii rakibidda ay tahay mid aan macquul ahayn, waxay sababi kartaa waxtarka yar yar ee waxsoosaarka shaandhada hawada. Waa kuwan taxaddarrada qaarkood markaad rakibayso:
1, rakibida Filterka Hawada, hubi inaad raacdo tilmaamaha lagu shaqeynayo, shaandhada shaashadda ee fallaarta ku socota magaca hawada, rakibida, hubi inaad hubiso in falaarta iyo jihada dhabta ah ee isku mid ah Hawada, haddii loo baahdo rakibaadda toosan, markaa iyadu Waraaqaha miiraha ee gudaha waa in lagu toosiyaa dhinaca dhulka. Marka la rakibayo, waa inay ka dhigtaa dusha mesh shabagga gadaasha jihada gadaalkeeda, iyo bacda Filterka Hawada, bacdu waa inay ahaataa dhererka jihada oo dhulka u toosan.
3, Filterka Hawada kahor inta aan la rakibin, ha furin boorsada ama filimka baakada, si looga fogaado waxyeelada qalabka, oo lagu calaamadeeyo jihada keydka sanduuqa. Nidaamka maaraynta, inaad si tartiib ah u sameyso, si looga fogaado naxdinta iyo isku dhaca, si uu u waxyeeleeyo Filterka Hawada. Wixii miirayaasha waxtarka sare, jihada rakibaadda ee tuubada waa inay ahaato mid sax ah; intaa waxaa sii dheer, shaandhada isku darka saxanka jiingado ah ee rakibida toosan, guddiga jiingado waa inuu noqdaa mid dhulka ku toosan.
HOREWaa maxay Sifeeyaha Hawada ee Sifeeyaha Hawada?
NEXTMaxay yihiin astaamaha iyo adeegsiga heerkulka sare iyo miiraha hawada sare?